Lufthansa Group dia mitatitra ny vola miditra amin'ny telovolana voalohany tsara indrindra hatramin'ny 2008
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Lufthansa Group dia mitatitra ny vola miditra amin'ny telovolana voalohany tsara indrindra hatramin'ny 2008
"Nanohy ny lalan-tsika mahomby tamin'ny telovolana voalohany tamin'ity taona ity izahay ary nahavita vokatra tsara hafa," hoy i Ulrik Svensson, Lehiben'ny tompon'andraikitra ara-bola ao amin'ny Deutsche Lufthansa AG, nanolotra ny valim-bolan'ny Vondrona Lufthansa nandritra ny telo volana voalohany tamin'ny taona 2017. "Ho an'ny vanim-potoana iray izay sarotra amin'ny indostrian'ny seranam-piaramanidina, efa namoaka ny valim-pikaroham-bola voalohany azonay nanomboka tamin'ny 2008. Izany dia vokatry ny fironana tsara indrindra ao amin'ny Lufthansa Cargo sy ny fitomboana matanjaka ao amin'ny Lufthansa Technik. Mampiseho ny tanjaky ny fananganana malalaka amin'ny maha vondrona fiaramanidina antsika. ”
"Amin'ireo kaompaniam-pitaterana anay," hoy hatrany i Svensson, "mahita fivoarana miabo amin'ny tontolon'ny vidiny sy fidiram-bola avo kokoa izahay. Mandritra izany fotoana izany, na izany aza, tsy afa-po amin'ny fampivoarana ny vidin'ny zotram-piaramanidina isika. Ka hanohy hitazona fifantohana mazava sy tsy miova amin'ny fandaniana izahay. Ny fampivoarana ny vola azontsika amin'ny telovolana voalohany dia nohamafisin'ireo valiny tsy miasa. Zava-dehibe fa na dia tsy nisy ireo aza, dia mbola nitatitra ny valim-panatsarana tamin'ny telovolana voalohany. ”
Sambany ny fanamafisana ny Brussels Airlines
Ny vola miditra amin'ny telovolana voalohany ho an'ny Vondrona Lufthansa dia nitentina EUR 7.7 miliara, fiakarana 11.2% tamin'ny taona teo aloha. Miakatra 13.0% ny isan'ny mpandeha ary 8.3% marobe ihany koa ny varotra entana, nitombo 10.9% ka hatramin'ny 5.8 miliara dolara ny vola miditra amin'ny fifamoivoizana. 4.9 isa isan-jato amin'ity fiakarana ity dia azo avy amin'ny vola miditra amin'ny fifamoivoizana avy amin'ny Brussels Airlines, izay natambatra voalohany indrindra hatramin'ny 1. Janoary 2017.
Io koa dia nampitombo ny mpiasa totalin'ny Lufthansa Group ho mpiasa manodidina ny 129,000.
Ny laharam-pahamehana momba ny EBIT namboarina dia nitentina 25 tapitrisa EUR tamin'ny telovolana voalohany 2017, fanatsarana EUR 78 tapitrisa tamin'ny vanim-potoana mitovy tamin'ny taon-dasa. Ny EBIT nandritra ny vanim-potoana dia nohatsaraina EUR 65 tapitrisa ka hatramin'ny EUR 16 tapitrisa. Ny valiny netin'ny vanim-potoana dia nahatratra EUR -68 tapitrisa (Q1 2016: EUR -8 tapitrisa).
Ny vidin-tsolika amin'ny telovolana voalohany dia mitentina 1.2 miliara EUR, 13.0% ambonin'ilay ambaratonga voalohany. Ny sandan'ny vola tsy miovaova amin'ny solika amin'ny kaompaniam-pitateran'ny vondrona dia nitombo 1.4%. Ny fiakarana dia noho ny antony maro samihafa, indrindra ny vidin'ny MRO avo lenta ao amin'ny Lufthansa German Airlines sy Austrian Airlines ary koa ny vidin'ny mpandeha ambony noho ny fanatsarana ny enta-mavesatra. Manoloana ny fiakarana 9.5% amin'ny fahaiza-manao, ny fidiram-bolan'ny vola tsy miova dia nidina 1.1%. Tamin'ny volana martsa, ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka an'ny kaompaniam-pitaterana vondrona Lufthansa Group dia nahita fanatsarana ny vokatra azony voalohany hatramin'ny 2013.
Ny zotram-pifandraisana dia mandefa valiny malemy kokoa
Ny Network Airlines an'ny vondrona Lufthansa dia nampiakatra ny vola azony tamin'ny telovolana $ 224 tapitrisa ka hatramin'ny 4.9 miliara EUR. Ny EBIT namboarin'izy ireo nandritra ny vanim-potoana dia nidina EUR 76 tapitrisa ho EUR -40 tapitrisa raha oharina amin'ny fototra fampitahana matanjaka tamin'ny taona lasa, izay nahitana entana tsy niverimberina tao amin'ny Austrian Airlines. Ny Lufthansa German Airlines dia namoaka EBIT Adjusted tamin'ny volana voalohany tamin'ny vola EUR -12 tapitrisa (nilatsaka tamin'ny EUR 57 tapitrisa), raha nitatitra kosa ny Austrian Airlines EBIT AdjUST izay mitentina EUR -59 tapitrisa (nahena ny 29 tapitrisa EUR). Suisse kosa, nanatsara ny EBIT namboarina nandritra ny vanim-potoana tamin'ny 14 tapitrisa EUR ka hatramin'ny 35 tapitrisa EUR, ary mijanona ho kaompaniam-pitaterana avo indrindra an'ny vondrona.
Vokatra ho an'ny Airlines Point-to-Point amin'ny ambaratonga voalohany
Niakatra tamin'ny 113% ny fahaizan'izy ireo, saika nitombo avo roa heny ny vola azon'ny Vondron'orinasa (+ 81%). Ankoatry ny fitomboan'ny biolojika, ny fiakarana dia manokana noho ny fanamafisana voalohany ny Brussels Airlines. Ny fidiram-bolan'ny vola mitohy dia nihena 13.4%. Saingy rehefa nihena ihany koa ny vidin'ny tarika, dia nifanaraka tamin'ny ambaratonga voalohany talohan'ny taona ny Point-to-Point Airlines EBIT namboarina ho EUR 132 tapitrisa.
Ireo orinasam-panompoana dia mitondra fampandrosoana tsara
Ny fivoarana tsara an'ny AdBied EBIT dia azo avy amin'ny fanatsarana voalohany ao amin'ny Lufthansa Cargo sy Lufthansa Technik. Lufthansa Cargo dia nahazo tombony tamin'ny famerenana amin'ny laoniny ny fitakiana entana sy ny fahombiazana voalohany tamin'ny fandaharanasa fanenanana ny vidiny ary nampiakatra ny EBIT namboarina nandritra ny fe-potoana tamin'ny EUR 52 tapitrisa ka hatramin'ny 33 tapitrisa EUR. Lufthansa Technik dia nampisondrotra ny vola miditra sy ny maridany (hatramin'ny 9.4%) mba handefasana ny EBIT mifanaraka amin'ny EUR 137 tapitrisa, fanatsarana EUR 50 tapitrisa tamin'ny telovolana voalohany 2016. Na eo aza ny fandaniana amin'ny fandaniam-bola, ny LSG Group dia namoaka valim-bola azo, izay EUR -2 tapitrisa, dia nifanaraka tamin'ny ambaratonga (+ EUR 2 tapitrisa) tamin'ny taona lasa. Ny orinasan'ny vondrona hafa sy ny asa afovoany dia nampitombo ny vola azony tamin'ny telovolana voalohany (anisan'izany ny vola sy ny valin'ny fanamafisana) tamin'ny EUR 58m tamin'ny taona teo aloha ka hatramin'ny 29 tapitrisa EUR.
Fampiroboroboana ny mari-pamantarana ara-bola lehibe
Ny valin'ny asa nohatsaraina sy ny famandrihana mialoha dia nampiakatra ny fivezivezin'ny Vondrona tamin'ny 49.5% hatramin'ny EUR 1.6 miliara. Ny fikorianan'ny vola maimaim-poana dia saika nitombo avo roa heny tamin'ny EUR 1.1 miliara, na eo aza ny fampiakarana 5.7% amin'ny fandaniambola. Ny trosa ara-bola Net dia nidina ho EUR 1.9 miliara, 28.7% nidina avy amin'ny ambaratonga tamin'ny faran'ny 2016. Ny tahan'ny fitoviana dia nidina ho 17.9% ihany koa, ny teboka 2.7 isan-jato dia nidina avy amin'ny ambaratonga faran'ny taona 2016. Ity dia vokatry ny fitambaram-bola nitarina tamin'ny fampindramam-bola vaovao, ny fanamafisana ny Brussels Airlines ary ny fironana amin'ny famandrihana mialoha.
Niakatra 3.5% ny vola fisotroan-dronono raha oharina amin'ny faramparan'ny taona 2016 hatramin'ny EUR 8.7 miliara, vokatry ny fihenan'ny isa 0.1 isanjato isan-jato ny tahan'ny fihenam-bidy ataon'ny mpisera Ny fandraisana anjara voalohany amin'ny vola 1.6 miliara dolara amin'ny volan'ny fisotroan-dronono natokana ho an'ny mpikarakara ny sidina Lufthansa German Airlines dia mbola tsy nalaina ary ho hita taratra eo amin'ny taratasy fandanjana ihany avy eo. Avy eo, dia hanafohezana ny fitambaran-taratasy indray ary hanatsara ny tahan'ny fitoviana mifanaraka amin'izany.
"Na eo aza ny valim-panadinana matanjaka tamin'ny volana voalohany sy ny famandrihana tsara teo amin'ny seranam-piaramanidina anay, dia tsy miova ny torolalanay mandritra ny taona 2017," hoy i Ulrik Svensson. "Amin'ireo kaompaniam-pitaterana anay dia mbola tsy manana fahitana ampy momba ireo famandrihana amin'ny telovolana fahatelo manan-danja."
Ho an'ny taona 2017 feno, ny Vondrona Lufthansa dia manantena ny hitatitra vola be amin'ny avo kokoa sy EBIT voalamina kely ambanin'ny taona lasa. Ny vidin-tsolika (ao anatin'izany ny an'ny Brussels Airlines) dia antenaina hitombo 500 tapitrisa EUR. Miaraka amin'ny 4.5% fitomboan'ny fahaiza-manao sy fitomboana 12.5% amin'ny ankapobeny, ny fidiram-bolan'ny vola tsy miova dia antenaina hihena ambany noho ny amin'ny taona 2016. Ary na eo aza ny fiakaran'ny vidin'ny singa voarakitra tamin'ny telovolana voalohany 2017, ny Vondrona Lufthansa dia nanolo-tena hatrany Tanjona maharitra amin'ny fampidinana ny vidin'ny singa tsy miorina amin'ny solika, ary hanohy hanatratra an'io tanjona io hatrany.